हरिकुमार श्रेष्ठ: सेयरबाट करोडपति, सेयरबाटै रोडपति ! – OnlinePahar
२८ माघ २०७७, बुधबार ०८:१२ Basanta Khanal	0 Comments	share
हरिकुमार श्रेष्ठ, नेपालको सेयर बजारको दुई दशकसम्मको अवधिमा चर्चाको शिखरमा रहेको एउटा नाम हो । सेयर बजारमा हालसालै छिरेका नयाँ लगानीकर्ताका लागि यो नौलो नाम भए पनि पुराना लगानीकर्ताका लागि यो परिचित नाम हो । सन् २००१ देखि शंकरदेव क्याम्पसमा अध्यापनरत उनै श्रेष्ठ नेपाली सेयर बजारका कुनै बेलाका एक कुशल खेलाडी मात्र होइनन्, सेयरबाट सोच्दै नसोचेको पैसा कमाउने केही सीमित पात्रहरुमध्येका एक व्यक्ति समेत हुन् । सेयरमा लगानी गरेर रातारात करोडपति बनेका तिनै श्रेष्ठले अंगिकार गरेका कतिपय गलत लगानी रणनीतिले उनलाई शून्यमा झारिदियो । सेयरबाटै करोडपति भएका र करोडपतिबाट रोडपति बनेका उनै श्रेष्ठसँग उनको सेयर अनुभव र सेयर जीवनका आरोहअवरोहका बिषयमा हामीले कुराकानी गरेका छौ । नयाँ तथा पुराना लगानीकर्तालाई उनको सफलता र त्यसपछि फेरि अधोगतितर्फको यात्रा र त्यसलाई समेत सम्हाल्दै फरक पेशमा प्रवेश गरी पुनः करोडपति भएको रोचक जीवनकहानी प्रेरणाको स्रोत हुने ठानेर हामीले यो जमर्को गरेका हौ । प्रस्तुत छ बिजशालाको तर्फबाट भक्तराज रसाइलीले उनै श्रेष्ठसँग २ बर्ष पहिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
–मेरो जीवनको उतारचढावलाई सम्झँदा म आफैंलाई पनि एक कथा जस्तो लाग्छ । म सेयरबाट बर्बाद भए पनि हिम्मत हारिँन । जसले जत्तिसुकै भने पनि, जसले जत्तिसुकै टर्चर दिए पनि मैले गर्नुपर्ने काम गर्न छाडिँन । मैले अर्निङ्ग गर्ने काम कहिले छाडिँन । मेरो नेटवर्थ नेगेटिभ नै भए पनि मैले तिर्नुपर्छ भनेर वैकल्पिक बाटो खोजेको हुँ । मैले मिहिनेत गरेको हँु । मान्छेको गफ धेरै हुन्छ, काम गर्दैन, हात चल्दैन । मुख मात्र धेरै चल्छ । यो नै मान्छेको ठूलो कमजोरी हो । मान्छेले बोल्नु धेरै भन्दा पनि मिहिनेत धेरै गर्ने र दिमाग लगाउने र कामप्रति प्रतिबद्ध भएर लाग्ने हो भने यहाँ असंभव केही छैन । तर, भाग्य र मिहिनेत चाहिँ हुनैपर्ने रहेछ । पहिला मेहेनत गर्नुपर्यो, त्यसपछि भाग्ले साथ दिनुपर्यो । मैले टिचिङ्ग र ट्युसनबाट कमाएको र सेयरबाट कमाएको पैसाभन्दा धेरै पैसा सेयरमा नै सकेको कुरा यथार्थ हो । तर, मैले बजारमा क्र्यास आउँदा बिजनेसमा डाइभर्ट गरिसकेकोले मलाई रिकभर हुन केही सजिलो भयो र मेरो प्लान पनि सक्सेस भयो । सेयर बजारमा मेरो पोर्टफोलियो कुनै बेला ५० औं करोड देखियो होला, तर पनि अहिले मैले बिजनेसमा मिहिनेत गरेर त्यत्ति नै बराबर होला नहोला, यद्यपि म सन्तुष्ट छु । मेरो रेगुलर कमाइ भएकाले अहिले करोडौं खर्च पनि गर्न सक्छु । अहिले धेरै नै सहज छ । त्यत्तिबेला कागजी रुपमा पैसा हुन्थ्यो, बैंक ब्यालेन्स १ रुपैयाँ पनि हुँदैन थियो । कतै खर्च गर्नुपरे हातमा १ रुपैयाँ हँदैन थियो, सेयर छ करोडौंको, हातमा १ पैसा नगद थिएन ।। अहिले जत्ति चाह्यो त्यत्ति जुट्छ । इनह्याण्ड क्यास हुने काम गर्नुपर्ने रहेछ ।
← कोरोनाविरुद्धको दोस्रो खोप लगाउन ढिला भए के हुन्छ ?
बोनस शेयर बन्धक बनाउँदै कम्पनीहरु :साधारण सभाले पारित गरेको ३ महीना बित्दा पनि सूचीकृत भएन →
सगरमाथा इन्सुरेन्सको बोनस सेयर घोषणा